Cunto kariska jilicsan ee jilicsan + fiidiyowga fiidiyowga - Keega
Cunto Velvet Cake Recipe
Keeg jilicsan oo jilicsan oo qoyan oo leh dhaxan qaanso-biyoodka
Keega jilicsan ee jilicsan ayaa ah cuntada aan u muuqdo inaan aad u isticmaalayo. Markii ugu horeysay ayaan u abuuray aniga Keega Maalinta St. Patrick casharro laakiin tan iyo markii loo isticmaalay keegga Dr. Seuss, keegag isboorti loo yaqaan, iyo xitaa keegag dhalasho. Marna ma ogaan doontid goorta aad u baahan tahay keega wanaagsan ee jilicsan ee jilicsan! Waxaad si fudud ugu beddeli kartaa cagaarka midabbada kale ee mugdiga ah sida buluug ama guduud sidoo kale haddii ay taasi tahay midabka aad u baahan tahay.
sida loo xakameeyo shukulaatada bilaa heerkulbeeg
Keeggan waxaa laga soo qaatay kan keega jilicsan ee dhabta ah oo leh dhadhan macaan oo cajiin ah oo subagga caatada ah leh oo fudud, jilicsan, qoyan oo runtii dhadhan fiican leh.
Muxuu dhadhamiyaa keega jilicsan ee jilicsan?
Keega jilicsan ee cagaaran runti waa uun keeg jilicsan oo casaan ah laakiin leh midabaynta cuntada cagaaran halkii laga casaan lahaa. Dhadhanku waa macaan oo ay ku dheehan tahay dhadhan ka dhasha caano-caano. Cuntadan waxaa ku jira budada kookaha ah laakiin keegga xaqiiqdii uma dhadhamin sida shukulaatada.
Keegga waa mid aad u qoyan, wuxuu leeyahay jajab aad u jilicsan runtiina runtii waa dhadhan fiican!
liin macmacaan leh liin dhanaan
Sida loo sameeyo keega jilicsan ee cagaaran
Keeggan jilicsan ee jilicsan ayaa ah mid aad u fudud in la sameeyo, gabadhaydu waxay u samaysay casharrada habka loo karsado. Si fudud iskugu dar dhammaan walxahaaga qoyan (oo ay ku jiraan ukunta) baaquli isla markaana isla wada faasha. Ka dib isku dar dhammaan walxahaaga qallalan ee ku jira weelka mashiinkaaga istaagga leh lifaaqa suufka. Ku shub maaddooyinka qoyan qalalan oo ha ku darsadaan hal daqiiqo si ay u horumariyaan qaabka.
Ku shub batterigaaga laba 8 ″ digsiyada wareega ama saddex 6 ″ digsiyada wareega. Ha u qaboobaan ka hor inta uusan dhaxan. Waan jeclahay subag macaan si aad ugu isticmaasho buuxin laakiin jiis baraf ah ayaa si fiican u shaqeeya sidoo kale.
Haddii aad raadineyso siyaabo badan oo aad ku qurxiso keegaaga jilicsan ee cagaaran, iska hubi faleebada qaanso roobaadka dheriga keega dahabka ah loogu talagalay Maalinta Saint Patrick.
sida looga cadhoodo shukulaatada cad ee microwave-ka
Waan jeclahay sida qaanso roobaadka qaansoroobaadku ugu muuqdo gudaha keega jilicsan ee cagaaran. Aad u damaashaad badan!
Sida loo sameeyo qaansoroobaad buttercream oo loogu talagalay keega jilicsan ee cagaaran
Si aan u sameeyo dhaxan qaanso roobaadka, waxaan si fudud u midabeeyay oo ku saabsan 1/2 koob oo buttercream leh jel midabaynta cuntada caadiga ah. Waxaan isticmaalay casaan, oranjo, jaalle, cagaar nuurad ah, buluug khafiif ah, iyo buluug / casaan. Midabadaada ku rid boorso yar oo tuubooyin ah oo ka jar caarada.
Wareegyo isku xidha tuuboyinka oo ku dheji lakabyada keegaaga oo ka bilaabmaya buluug kuna shaqeynaya habkaaga si aad uhesho buluug. Waxaad dib ugu bilaabi kartaa casaanka markale hadii aad ubaahantahay subag badan.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan keeggan jilicsan ee cagaaran ayaa ah inuu dhab ahaantii dhadhankiisu runti aad u fiican yahay. Waxay leedahay dhadhan dhadhan fiican leh oo subagga caatada ah oo ma dhadhamin kartid midabaynta cuntada gabi ahaanba. Hab fiican oo aad uga dhigayso keegaaga mid xiiso leh gudaha iyo dibaddaba.
Keeggan jilicsan ee jilicsan ayaa ah mid aad u xiiso badan in loo sameeyo Maalinta St Patricks Day ama fasax kasta oo kale oo aad u baahan tahay keeg qurux badan oo cagaar ah oo waliba dhadhan fiican leh! Waxaa laga soo qaatay cunnadayda keega jilicsan ee loo yaqaan 'velvet cake'. Waqtiga Diyaarinta:10 daqiiqado Waqtiga karinta:30 daqiiqado Wadarta Waqtiga:40 daqiiqado Kalori:1077kcal
▢14 oz (340 g) Burka AP
▢14 oz (397 g) Sonkorta dahaaran
▢laba tsp budada kookaha ee dabiiciga ah (aan la dhajin) Waan jeclahay Hershey's Dark Dark
▢laba weyn ukunta
▢4 oz (114 g) saliidda cuntada
▢8 oz (227 g) caano subag
▢1 Tbsp khal khal ah
▢4 oz (114 g) subag aan cusbo lahayn
▢1 tsp vanilj
▢1-2 tsp midabaynta cuntada jaalaha ah
▢1 tsp midabka cuntada cagaaran
▢4 oz ukunta la kariyey
▢16 oz subag aan cusbo lahayn
▢16 oz sonkorta budada ah
▢1/2 tsp midabaynta cuntada ikhtiyaari ah
Kuleyli foornada ilaa 350F oo diyaari laba 8 'digsiyo keeg ah oo leh keeg fiican ama buufin digsi leh oo la doorbido
Ukuli ukunta saliid, caano subag, khal iyo subagga la dhalaalay iyo midabaynta cuntada ilaa la isku daro oo dhinac la dhigo.
Dhig maaddooyinka qalalan baaqulika mashiinkaaga istaagga oo isku walaaq dhowr ilbiriqsi si aad isugu darto
Ku dar walxo qoyan qallalan oo ku walaaq dhexdhexaad dhexdhexaad ah illaa hal daqiiqo illaa la isku daro
Ku shub digsiyada keega oo dubo ilaa 30 daqiiqo ama ilaa cadayga uu si nadiif ah u soo baxayo. Qabow iyo qabow ka hor dhaxan
Ku rid ukunta cad iyo sonkorta budada ah baaquli isku qasan oo leh lifaaqa ku dheji. Jeeg isku dar. Ku dar subagga qaybo yaryar ka dibna vanilj iyo milix. Ku karbaasha dusha sare illaa iftiinka iyo khafiifka iyo caddaanka. Ikhtiyaari ah: u wareeji lifaaqa weelka iskuna qas hoos illaa 15-20 daqiiqadood illaa ay goobooyin hawo ahi ka dhammaanayaan.
U qaybi 7 maddiibadood oo kala duwan oo ku dar midabaynta cuntadaada (jaalle, oranjo, casaan, casaan, guduud, buluug, cagaar) Ku daadi buttercream boorsada si aad u buuxiso keega
Qabooji banaanka keega sidaad rabto
U adeegida:1adeegaya|Kalori:1077kcal(54%)|Kaarboohaydraytyada:112g(37%)|Protein:6g(12%)|Dufan:68g(105%)|Dufan Dufan:44g(220%)|Kalastarol:188mg(63%)|Sodium:409mg(17%)|Kaliumperyamper:74mg(laba%)|Sonkor:92g(102%)|Vitamin A:2035IU(41%)|Kaalshiyam:44mg(4%)|Bir:1.6mg(9%)
shukulaatada ilaa saamiga kareem ee ganache
habka ugu fiican ee loo karinayo rootiga adduunka
sida loo sameeyo ubax fiiqan si fudud
cuntooyinka keegga ah ee faniinka vanilj ka soo xoq